Ungayibuka Kanjani iNetflix usebenzisa i-ExpressVPN? - I-Vpn
INetflix ingesinye sezidlakela ezivelele ezinsizeni zokusakaza online. Umuntu angaphikisa ukuthi iNetflix yisizathu sokuthi ukusakazwa ku-inthanethi kukhule kakhulu ekuthandeni. Kodwa-ke, bagcina isikhombimsebenzisi sisebenziseka kalula futhi sisebenziseka kalula. Ukuphepha kwabo nezinye izinyathelo zibonakala ziqondile, kepha kwenzeka ukuthi babe nembondela eyinkimbinkimbi kakhulu.
Inkampani enokubusa okunjalo izokwazi ukuba nekhono emhlabeni wedijithali. Kodwa-ke, futhi kuyisine kuma-VPN amaningi. Akufanele kusimangaze, kepha iNetflix ingelinye lamapulatifomu ambalwa emhlabeni angadlula ama-VPN. Ngamazwi alula, i-Netflix inesakhiwo esiyinkimbinkimbi esivimbela ama-VPNs ukuthi asifinyelele.
Kodwa-ke, i-ExpressVPN ingomunye wabahlinzeki be-VPN abasebenza nge-premium-grade abakwaziyo ukukhipha iNetflix futhi bakulethele ukufinyelela okuphelele ku-database yayo.
Bheka i- I-ExpressVPN Black Friday Thengisa ukonga i-85% Discount.
Kungani Udinga i-VPN yeNetflix?
Uma uvela ngaphandle kwe-USA, ungahle ungakuqapheli, kepha ngeqiniso iNetflix inelabhulali ebanzi kakhulu etholakala kuphela e-USA. Ine- iqoqo eliphelele lemibukiso ye-TV nama-movie ukuze ungangeni ezweni lakho. Kungani lokhu kubandlululwa?
Hhayi, awukwazi ukusola iNetflix. Yimithethonqubo yokuqukethwe okuku-inthanethi nemithetho ephathelene nabo ezweni lakho. Ngakho-ke, okunye okuqukethwe akutholakali. Kungenzeka futhi ukuba nelayisense kwemidlalo ethile ye-TV, noma ama-Movie awavumeli i-Netflix ukuthi ikunikeze ezweni lakho. Kunobuchwepheshe obuningi, ngakho-ke awukwazi ukusola noHulumeni wakho. Kepha ukukubeka ngamagama alula, akutholakali ezweni lakho, isikhathi.
Kungaba ukuvimba kwe-Geo noma ukuvinjelwa kwe-Geo okuvimbela ukufinyelela kokuqukethwe esifundeni sakho. Ukuze unqobe lokhu, udinga umhlinzeki wesevisi ye-VPN esheshayo futhi enekhono. Cishe noma yikuphi mahhala Insizakalo ye-VPN yeNetflix izokwehluleka ukuletha imiphumela. Ngakho-ke, i-Express VPN iyisinqumo esithembekile.
Ezinye izizathu zokusebenzisa i-VPN yeNetflix:
Abahlinzeki abaningi be-intanethi bakhawulela umkhawulokudonsa wakho ngaphandle kokukwazisa, ngokusobala ngokusakazwa
Uma usebenzisa isikole somphakathi noma uxhumano lwe-Wi-Fi olukhawulelwe oluneNetflix noma okunye okuqukethwe kuvinjiwe, i-VPN kuyisinqumo esihle kakhulu sokudlula lokhu.
Ama-VPN avikela imininingwane yakho ngokusebenzisa i-Netflix nokuphequlula i-inthanethi. Ngakho-ke, abantu besithathu nezikhangiso ngeke zithole noma yiluphi ulwazi oluthengiselwa bona.
Ungayivimba kanjani iNetflix ngokusebenzisa i-ExpressVPN?
I-ExpressVPN ikulethela indlela esheshayo nephumelelayo yokusebenzisa isevisi ye-VPN. Landela lezi zinyathelo, futhi ulungele ukuhamba:
Landa i-ExpressVPN kudivayisi yakho
Bhalisa futhi uqiniseke ukuthi unokubhaliselwe kwe-ExpressVPN
Qala i-ExpressVPN bese uya ezindaweni
Uma ufuna okuqukethwe okuhle kakhulu, khetha i-USA ukuthola indawo
Ngokwengeziwe, yenza isivivinyo sejubane ukuze ubheke ijubane eliphakeme kakhulu elitholakala kuseva yase-USA
Ngekhwalithi ye-SD nangaphansi, udinga okungenani isivinini esingu-3 Mbps.
Ngokuqukethwe kwe-HD, udinga isivinini esingu-5 kuye ku-25 Mbps.
Khetha iseva ngejubane eliphakeme kakhulu elitholakalayo
Ngena ngemvume ku-Netflix
Manje usungasakaza okuqukethwe
Uma ubhekene nanoma iyiphi inkinga ngeseva, njengokuya kwejubane, ungashintsha kalula iseva ngokudlulela ku-ExpressVPN. IWindows noma iMac yizona zindlela ezingcono ongakhetha kuzo sakaza okuqukethwe ngaphandle kwenkinga. Uma iseva ivinjelwa, akudingeki ukhathazeke. Kunamaseva angaphezu kwe-3,000 atholakala emazweni angaba ngu-160 wakho.
Uma iseva yase-USA ingasebenzi, ungazama i-UK, Canada, Japan, noma iFrance ezikuphathela ukuletha isivinini esikhulu nokufinyelela okuhle kokuqukethwe. Ngeke uzwe noma yimuphi umehluko ngejubane nakancane.Ngenye indlela, uma amaseva engasebenzi, ungatshela ukuxhaswa kwe-ExpressVPN, futhi bazofinyelela umsuka wenkinga.
Ingabe i-ExpressVPN iyatholakala mahhala?
I-ExpressVPN ayikhululekile ekuqaleni. Ayikho inketho yesivivinyo etholakalayo noma. Kodwa ungakhathazeki! Kukhona isiqinisekiso sokubuyiselwa imali sezinsuku ezingama-30 ongasisebenzisa ne-Expressvpn. Ikuvumela ukuthi ubhalisele i-ExpressVPN futhi uyisebenzise cishe inyanga, noma izinsuku ezingama-29. Ngama-30thusuku, ungacela ukubuyiselwa imali eqenjini lokusekela.
Bazokunikeza izephulelo uma ungazithanda, ungazizama. Ngaphandle kwalokho, ungavimbela iphakethe lapho. Ngenye indlela, uthola uhlelo lokudlulisela nge-ExpressVPN. Uma unomngane ozimisele ukubhalisa, wena nomngane wakho nizothola i- Isivivinyo samahhala sezinsuku ezingama-30 .
Lapho ubheka abangani abaningi njalo ngenyanga, izengezo ezengeziwe zamahhala ezingama-30 ozothola. Le yindlela engcono yokusebenzisa i-ExpressVPN mahhala, ikakhulukazi iNetflix nezinye izinsiza.
Ungayisebenzisa I-Netflix Mahhala Nge-ExpressVPN?
Cha, udinga ukubhaliswa kweNetflix uma ufuna ukufinyelela kokuqukethwe. I-VPN ayikunikeli lutho mahhala. Uma uzama ukufinyelela kokuqukethwe kweprimiyamu kwanoma yiluphi uhlelo noma umhlinzeki wesevisi, udinga ukubhaliswa kwabo. I-VPN ikusiza ukuthi uthuthe futhi ikunikeze ukuxhumana ngaleyo ndlela.
Kungani i-ExpressVPN yeNetflix?
INetflix isebenzisa indlela eyingqayizivele eyaziwa ngokuthi ‘i-VPN IP.’ Njenganoma yimuphi omunye umhlinzeki wesevisi, bayakwazi ukufinyelela Ikheli lakho le-IP. Uma usebenzisa i-VPN, kunekheli elithile le-IP olitholayo. INetflix izoyithola bese iyivimba ekufinyeleleni. Ungahle uthole umlayezo wokuthi usebenzisa i-Proxy noma into efanayo. Kodwa-ke, i-ExpressVPN isebenza njalo ekuletheni amaseva amasha nama-IP akwenza ukwazi ukufinyelela i-Netflix ngempumelelo.
Nazi ezinye izinzuzo zokusebenzisa i-ExpressVPN:
Isivinini esihle kakhulu:Imvamisa ukusebenzisa izinsizakalo ze-VPN kuholela ekwehleni kwejubane lakho le-inthanethi. Ngenkathi kungenakugwemeka, iningi lamaseva we-ExpressVPN ahlinzeka kufika ku-90-95% wejubane lakho le-inthanethi langempela. Ama-VPN amaningi wamahhala nabanye abahlinzeki be-premium bayahluleka kulesi sici.
Iqoqo Elikhulu Leseva:Vele, i-ExpressVPN ineqoqo eliphoqayo lamaseva nokutholakala emazweni ahlukahlukene. Kubukeka sengathi akunakuqhathaniswa kulezi zici ngamanye ama-VPN amaningi emhlabeni jikelele. Ngokuhambisanayo, futhi kuyisizathu sokuthi uthole isivinini esihle kangaka ngokuxhuma.
Awekho Amarekhodi:Mhlawumbe lesi kufanele kube yisizathu esiyinhloko sokusebenzisa i-ExpressVPN. Ikugcina ungaziwa ngokuphelele futhi ayigcini amarekhodi womsebenzi wakho. Ngakho-ke, ungapheqa cishe noma yini. Kodwa-ke, kufanele ukhumbule ukuthi uma usebenzisa i-ID yakho, kusenguwe. Isibonelo, uma usebenzisa i-akhawunti ye-FB ene-VPN, isakubonisa. Kepha kuhle kweminye imizamo nge-inthanethi.
Ukuphepha Kwezempi-Ibanga:I-ExpressVPN inezokuphepha ezisezingeni lomhlaba, ngenxa yokubethela kwabo ebangeni lezempi, anti-malware kanye nokuphepha kwe-254-bit. Kungcono kakhulu ekilasini amanye ama-VPN amaningi ahlulekayo ukuhlinzeka. Ngamanani okubhaliselwe kwawo, kuwufanele wonke amasenti.
Ukuhambisana okubanzi:Ungasebenzisa i-ExpressVPN cishe kunoma iyiphi idivayisi nepulatifomu ngaphandle komkhawulo. Ukubhalisa okukodwa kukulethela ukufinyelela ukukusebenzisa kumadivayisi afinyelela kwangu-5. Akungabazeki ukuthi kuyisici esikhanga kakhulu.
Kunezinye izinzuzo eziningi, njengokuhlinzekwa kwamakhasimende okuncomekayo. Ungasebenzisa kalula i-P2P noma amapulatifomu wokuhambisa ngaphandle kwenkinga. Uma uHulumeni wakho evimbele izinhlelo zokusebenza noma uma kukhona ukucindezelwa okubekiwe, ungakudlula. Konke lokhu ngenkathi ugcina ukungaziwa ngokuphelele. Iningi lalezi ezinye izinzuzo liyisilinganiso se-VPN.
I-ExpressVPN ayikuletheli ukufinyelela okungenakuphikiswa ku-Netflix, kodwa okunye izinsizakalo zokusakaza , kanjalo. Ngakho-ke, unomhlinzeki wensizakalo ye-VPN oqinile othembekile kakhulu. Iqinisa ukuphepha kwakho futhi ikuvikele ezinsongweni ezahlukahlukene kwi-inthanethi.
Uma ufuna ukuzwa iqoqo elibanzi lokuqukethwe kwe-Netflix noma 'okuqondene nesifunda', i-ExpressVPN ingenye yezinketho ezinhle kakhulu ezitholakalayo. Ngakho-ke qhubeka futhi ujabulele umkhawulokudonsa ongenamkhawulo, isivinini nokuqukethwe nge-ExpressVPN.